> Resource > Talooyin > Wedding Gift - caruusadaha xisbiga Gifts u malxiis, Groomsmen, iwm
Your xisbiga idinkoo Shifaysan, malxiis, groomsmen ah, gabdhaha ubaxa iyo giraan kii, iwm, ka ciyaaraan door muhiim ah si aad dhacdo arooska. Waxay buuxiso xaflad aroos aad, oo waa in aad rabto in aad dhihi mahad oo dhan oo iyaga ka mid kula hadiyad gaar ah.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fikradaha shakhsi hadiyad xisbiga idinkoo Shifaysan oo aad u doorato. Hadiyado Shakhsiga idin tusin daacadda iyo mahadnaq. Raadi fikrado hadiyad qaar ka mid ah halkan xisbiga idinkoo Shifaysan.
Guud ahaan raqiis ah oo qaali ah xisbiga idinkoo Shifaysan oo fikrado hadiyad
Lamaano badan soo gaarto waqti adag oo ku saabsan waxa u soo dirto sida hadiyad xisbiga idinkoo Shifaysan, gaar ahaan haddii ay tahay miisaaniyad. Sidaas waxa jira qaar ka mid ah malxiis hadiyado raqiis ah iyo hadiyado groomsmen raqiis ah in aadan wax badan oo weli qaali ah ma kharash. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
1. Ka dhig DVD hadiyad , Ururiya sawiro iyo videos aad qaaday xisbiga idinkoo Shifaysan oo waxaad ka samaysaa sawir iyo video DVD slideshow la sawirka software DVD slideshow . Tani waa hadiyad xisbiga ugu fiican idinkoo Shifaysan oo ilaashan xusuus macaan iyo in uu socon doono muddo dheer. Just Xusuusan xusuusta reer arooska ama saaxiibtinimo wada iyo waqti isku mid ah, idinku mahadcelinayaa in aad xisbiga idinkoo Shifaysan. Baadh hage user ku saabsan sida loo ka dhigi DVD sawir slideshow ah >>
2. sawrirrada A shakhsi : Dooro qaar ka mid ah sawirada weyn ee xisbiga idinkoo Shifaysan oo waxaad ka samaysaa sawrirrada ah shakhsi la qoritaan shakhsiga, fanka clip, sawir doodle, iwm la software sawrirrada ah. Samee sawrirrada ah digital iyo daabac u soo dirto hadiyad aan caadi ahayn weli wax ku ool ah ee xisbiga idinkoo Shifaysan. Iyadoo arrimo sawrirrada free dhisay-in, waxay qaadataa dhawr daqiiqo si ay u sameeyaan sawrirrada ah kartoo. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu hal-abuurka iyo maskax leh hadiyado xisbiga idinkoo Shifaysan oo si gaar ah oo weyn sida hadiyad malxiis.
3. Samee slideshow flash ah : Waxaad kala sooci karaa qaar ka mid ah sawirada iyo videos, ka dibna si fudud u isticmaali ah in la isticmaalo software slideshow flash in ay soo jeedin ku sawiro iyo videos galay il-qabad slideshow flash iyo gallery for wadaagga ah ee website iyo blog. Tani waa mid aad wax ku ool ah iyo xisbiga idinkoo Shifaysan oo waa in ay qiimeeyaan oo online oo leh dad badan wadaagaan. Tusaale ahaan, halkan waa slideshow flash arooska. Baro sida loo sameeyo slideshow flash a >>
Qaar ka mid ah fikradaha kale hadiyad idinkoo Shifaysan oo ah qof kala duwan
Fikrado hadiyad Wedding u malxiis
Waxaad dooran kartaa qaar ka mid ah sanduuqyada dahabka iyo dahabka ama qaar ka mid ah hadiyado wax ku ool ah loogu isticmaalo maalin kasta, sida bacaha kubado ama uwadida oo la isku qurxiyo. Waxa kale oo aad ku siin kara iyaga shahaadooyin in HBS ama salon ah malxiis sida hadiyado. Si aad hadiyadda malxiis u gaar ah, waxa kale oo aad ku gubi karaa DVD ah qaar ka mid ah heesaha malxiis aad ugu jecel yihiin la sawiro aad sida CD Cover isticmaalaya ah DVD Creator inay uga mahad sameeyo wax badan, waayo, maalintii aad u weyn.
Fikrado hadiyad Wedding u groomsmen
Waxaad ka iibsan kartaa groomsmen aad hadiyado classic qaar ka mid ah sida Zippo ah lagu shido ama waardiye jeebka horyalka Talyaaniga ama qaar ka mid ah kareemada xiirashada. Tan iyo markii ay dadka badankiisu sida ciyaaraha, waxa kale oo aad dooran kartaa qaar ka mid ah qalabkii ciyaaraha sida hadiyado groomsmen ama iyaga ugu yeedhi ciyaarta kubad ama show baabuur. Haddii uu jecel yahay videos qaar ka mid ah, inaad DVD gubi karaa inuu jecel videos la gubi DVD isaga iyo u soo dir isaga loogu ilaalinta.
Fikrado hadiyad Wedding gabdhaha ubax
Wixii gabadha yar, waxaad iyada ku siin karaan caruusada ah ugu shidan ama toy hadiyad. Gabdhaha yar jecel dahabka, si aad sidoo kale soo bandhigi karaa iyada oo la locket xardhan iyadu maal doonaa muddo sanado ah. Haddii gabadha sida Farshaxanka iyo farsamada gacanta, iyada ku siin karaa iyada sii xirmo ubax Kiinteistö farsamo. Ama waydii hooyadeed sawiro qaar ka mid ah oo la sameeyo sawrirrada ah iyada in uu korka iyada koritaanka isticmaalaya software sawrirrada ah.
Fikrado hadiyad Wedding giraantii sidayna
Wixii wiilasha, iminka funaanado ay ku qoran noqon doonaa hadiyad wanaagsan. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa taariikh shakhsi sawir la sawiro uu ku yaal la software ah sawrirrada digital. Haddii wiilka yar jecel isboortiga, waxaad isaga ku siin karaan a baseball, kubada cagta, ama basketball ereyada "All Star Ring sita" daabacay iyaga on.
Waxba ma ahan wixii hadiyado ku siin in aad xisbiga idinkoo Shifaysan, xusuusnow in hadiyadaha u yihiin shakhsi oo diiradda saaraan kooxaha qaataha ah ee.